blood donation – Healthy Life Journal
သွေးလှူမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျန်းမာနေသလားဆိုတာ သေချာအောင်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ ရေကိုအလုံအလောက် သောက်ထားရဲ့လား။ ကောင်းကောင်းအနားယူထားရဲ့လား။ ဆေးလိပ်ရှောင်ထားသလား။ အရက်မသောက်ဘဲ နေရဲ့လား။ ပြင်းထန်တဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းကို မလုပ်ဘဲနေသလား။ သံဓာတ်နဲ့ ပရိုတင်းဓာတ် ပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ပြည့်ပြည့်ဝ၀ စားထားရဲ့လား။ ဒီအချက်တွေကို...
မေး. သွေးလှူတာ ၁၈ကြိမ်ရှိပါပြီ။ ၁၇ ကြိမ်အထိ ဘာမှမဖြစ်ပါ။ ယခု ၁၈ကြိမ်မှာ မူးလဲသွားပါတယ်။ အိမ်ကိုဆရာဝန်တောင် ပင့်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်တာလဲ။ နောက်လှူလို့ရသေးလား သိချင်ပါတယ်။ Yamin Thaung(FB) ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ....
သွေးတိုးရှိသူ သွေးလှူလို့ ရ၊ မရ
မေး. သွေးတိုးရှိသူက သွေးလှူလို့ရပါသလားရှင့်။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. သွေးတိုးရှိတဲ့သူက သွေးလှူလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတလေ သွေးတွေအများကြီးထွက်သွားရင် မူးတာ၊ မောတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သွေးလှူဖို့ရာ အဓိက ဟေမိုဂလိုဘင် အားပြည့်၊ မပြည့်ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။...